तुफानले लडेका रुखमा दीपिका सिंहले बोल्ड डान्स गरेपछि…. (फोटो/भिडियो) – Taja Khawar
तुफानले लडेका रुखमा दीपिका सिंहले बोल्ड डान्स गरेपछि…. (फोटो/भिडियो)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ०७, २०७८ समय: ११:२८:५२
एजेन्सी – भारतीय अभिनेत्री दीपिका सिंह असाध्यै आलोचित बनेकी छिन् ।
चक्रवात तुफानका कारण महाराष्ट्रको तटीय इलाकाहरूमा ठूलो क्षति भयो । त्यसका कारण लडेका रुखबीच दीपिकाले डान्स भिडियो बनाइन् । तर त्यो भिडियो उनलाई मँहगो साबित बन्न पुग्यो । उनको ट्रोल भइरहेको छ । खास गरेर शोकको समयमा दीपिकाले मस्ती गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
तुफानका कारण उनको घरबाहिर पनि एउटा ठूलो रुख लडेको थियो । अभिनेत्रीले त्यही रुख वरपर रोमान्टिक पोज र डान्स भिडियो बनाइन् । अनि उनले इन्स्टाग्राममा फोटो र भिडियो पोस्ट गर्दै लेखिन्, ‘तपाईले तुफानलाई रोक्न सक्नुहुन्न । त्यसैले यस्तो गर्ने कोसिस नगर्नुस् । यस्तोमा तपाईले आफैंलाई शान्त राख्ने कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ र प्रकृतिको यस उदास रुपलाई अंकमाल गर्नुस् किनकी तुफान पनि सकिनेछ ।
यो रुख मेरो घरको ठिक अगाडि लडेको छ र यसले कसैलाई क्षति पुर्याएको छैन । तर, आफ्नो ढोकाबाट यो रुखलाई हटाउनुभन्दा पहिले मैले र रोहितले सम्झनाका लागि केही तस्विर लियौं ।’ पोस्ट लगत्तै दीपिकाको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
भारतिय सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले निरन्तार उनको खिल्ली उडिरहेकी छन् ।
Last Updated on: May 21st, 2021 at 11:33 am
७७९ पटक हेरिएको